Caabudwaaq: Gu’ Jirsiga ARDAA iyo Shirkii 2aad ee Sannad-guurada ARDAA – Radio Daljir
Maajo 16, 2017 1:32 b 0
Caabudwaaq – Maanta oo Isniin ah, taariikhduna tahay 15 May 2017, Radio Daljir waxaa uu qabtay shir sannadeedkii Barnaamijka ARDAA, kaas oo noqonaya shirkii labaad ee la xiriira sannad jirsiga ARDAA.
Shirka ayaa ka dhacay magaalada Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ka qaybgalay dad ka badan 50 qof, kuwaasi oo iskugu jiray rag iyo dumar, inkastoo 80% ay haween ahaayeen, waxaana qaybtii hore ee shirka xoogga lagu saaray tallaabooyinka hirgalay ee Barnaamijka ARDAA uu qaaday muddadii sannadka ahayd ee u shaqaynayey, meelaha uu tagey, bulshooyinka uu la kulmay iyo guulaha taariikhiga ah ee uu gaaray.
Shirkaan ARDAA ee maanta ka dhacay Caabudwaaq, ayaa la xiriira gu’ jirsiga Barnaamijka ARDAA oo soo bilawday sannadkii 2016, waxaana kale oo diiradda lagu saaray arrimo badan oo ku saabsan saamayntii abaaruhu ku yeesheen haweenka ku dhaqan degmada Caabudwaaq iyo deegaannada kale ee miyi iyo magaalaba leh ee hoosyimaada Caabudwaaq.
Ka qaybgalayaasha haweenka ah ee shirkaasi ka qaybgalay oo iskugu jiray masuuliyiin dawli ah oo maamulka degmada iyo kan guud ee Galmudug ka tirsan, kuwo maamula ururo haween oo maxalli, ganacsato haween ah iyo kuwo qaybaha kale ee dumarka ah ayaa soo bandhigay xogo badan oo haweenka degmada iyo deegaanno ka baxsan la xiriira.
Waxay sheegeen jiritaanka tirooyin badan oo xagga haweenka ah, siiba kuwa ka soo xarooday miyiga, xoolihiina ay ka marisay abaartii dalka oo dhan ka dhacday oo ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada Caabudwaaq, kuwaasi oo ay haysato dhibaato baaxad weyn oo xagga nolosha ah.
Haweenku, waxay tilmaameen dhawr dhibaato oo haysta haweenka soo cayroobay, kuwaasoo ay ka mid yihiin nolol xumo, caafimaad darro, iyo hoy la’aan, ayna u dheertahay buushashka iyo cooshadaha ay u hoydaan oo habeenkii loogu dhaco, looguna gaysto kufsi.
Dawladda federaalka iyo hay’adaha samafalka ayay ka dalbadeen in la caawiyo haweenka iyo carruurta cidlada fadhiya, kuna cayroobay abaartii dabadheerayd ee dalka ka dhacday, kuwaas oo sida ay sheegeen aan haysan waxay ku hirtaan.
Ugu dambayn Radio Daljir iyo maamulkiisa ayay u soo jeediyeen hambayo iyo bogaadin la xiriirta gacanta uu ka siiyo soo bandhigga codkooda iyo duruufaha haysta, ahna kuwa hadda iyo kuwo horeba.
ARDAA 112 Wararka 23922